Bahlomule ngomfundaze waseChina abafundi baseMbali | Eyethu News
Bahlomule ngomfundaze waseChina abafundi baseMbali
Lomfundaze uxhaswe inkampani yase-China i-China C ampus Net work kanti ubiza uhhafu wesigidi samarandi
BAHLKOMULE ngethuba elingandelebani lokuyofunda ezweni lase-China abafundi base-Mbali njengoba kube ibona ababashaye bonke emakhanda abafundi bezikole ezine abebeqokwe nazo ezifundweni i-Maths ne-physical Science base bethola ithuba lokuyofunda e-China ngonyaka ozayo.
U-Ayanda Sthole (18) obefunda umatikuletsheni eSiqongweni High School kanye noNtuthuko Zuma (18) obefunda eNsikayethu Comprehensive High School, bamenyezelwe njengabafundi abahlomule ngalomfundaze izolo (ngoLwesithathu) eCity Hall emcimbini wokuklomelisa abafundi abenze kahle kwi-Maths, Physical Science , Accounting kanye nesifundo esisodwa solimi kusukela ku-Grade 10 kuyaku matikuletsheni.
Lomcimbi ubuhlelwe i- Scie-Matical SA nokuyinhlangano ekhuthaza kweze-Maths and Science. Lomfundaze uxhaswe inkampani yase-China i-China C ampus Net work kanti ubiza uhhafu wesigidi samarandi ukuthi labafundi bafunde kuleliyalizwe iminyaka emine.
U-Ayanda othe ufuna ukwenza izifundo zobunjiniyela uthe ujabule kakhulu ukuthi ube ngomunye wabafundi abaqokiwe ngoba ubengathembi. “Mina bengizitshela ukuthi ngilana ukuzoshaya izandla ngihalalisele abathole leli thuba kodwa ke ngijabule ukuthi litholwe imina . Ngizokwenza konke okusemandleni ukuthi ngenze kahle ezweni lase-China kanti futhi ngizosebenza ngokukhulu ukuzikhandla,” kubeka u-Ayanda.
UNtuthuko naye ozokwenza izifundo zobunjiniyela uthe uyalithokozela kakhulu leli thuba kanti ufuna ukuthi uma ebuya azokwenza ushintsho ezweni laseNingizimu Afrika. “ Ngijabule kakhulu ngalelithuba kangangokuba uma sengibuya ngifuna ukuba ngamanye amaqhawe akulelizwe. Ngifuna ukubona abanye abantu abamnyama bephumelela nami.”
Usetholakele uMkhize obelahlekile